Klopp oo diiday inuu isbar-bardhig ku sameeyo finalkii 2005, xili uu sidoo kale shaaca ka qaaday mudnaanta koowaad Liverpool ee xilli ciyaareedkan – Gool FM
Klopp oo diiday inuu isbar-bardhig ku sameeyo finalkii 2005, xili uu sidoo kale shaaca ka qaaday mudnaanta koowaad Liverpool ee xilli ciyaareedkan
(Yurub) 14 Agoosto 2019. Macalinka kooxda kubadda cagta ee Liverpool Jurgen Klopp ayaa ka soo muuqday shir jaraa’id kahor kulanka ay caawa kula ciyaari doonaan Chelsea koobka UEFA Super Cup, kaasoo ka dhici doono garoonka Vodafone Park magaalada Istanbul ee dalka Turkiga.
Klopp ayaa ka hadlay dhowr arrimood ee quseeya ciyaarta caawa iyo diyaargarowga kooxdiisa Liverpool, iyo sida ay u doonayaan inay ku guuleystaan tartan kale, kaddib markii ay ku soo guuleysteen Champions League dhamaadka xilli ciyaareedkii hore.
Jurgen Klopp ayaa diiday inuu isbarbar dhigo kulanka ay caawa ku ciyaari doonaan magaalada Istanbul iyo ciyaartii taariikhiga aheyd ee 2005-tii, ay Liverpool ku garaacday AC Milan garoonka Atatürk finalkii Champions League.
Macalinka reer Germany ayaa wuxuu hadalkiisa ku bilaabay:
“Xaqiiqdii wuxuu ahaa kulan weyn, si wanaagsan ayaan kaga war qabaa in ku ciyaarista halkan ay qaas u tahay taageerayaasha, balse markan waxaan nahay shaqsiyaad ka duwan kuwii 2005-tii, Istanbul waa meel ku fiican in lagu ciyaaro kubadda cagta”.
“Chelsea waa koox adag, waxay sidaas ku muujiyeen ciyaartii ugu dambeysay oo ay la ciyaareen Manchester United, Frank wuxuu qabtay shaqo aad u wanaagsan”.
Intaas kaddib Jurgen Klopp ayaa wuxuu ka hadlay arrinta ku aadan bal haddii ay mudnaanta koowaad siin doonaan xili ciyaareedkan ku guuleysiga horyaalka Premier League wuxuuna yiri:
“Mar labaad ayaan diidanahay warkan, kaliya waxaan doonayaa inaan guuleysto kulamada soo socda waxa ay doonaan ha noqdaanee”.
Lampard oo sheegay war aad ugu xun taageerayaasha Chelsea, kahor kulanka caawa ee UEFA Super Cup 2019
RASMI: FIFA oo ganaax dul dhigtay kooxda Man City sababa la xiriira inay ku xad gudubtay sharciga dhaqaale wanaaga